Indonezia : Manalokaloka Ny Ho Avintsika Ireo Fahatsiarovana Navelan’ny Tsunami · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Febroary 2014 8:16 GMT
Nitsidika ireo fahatsiarovana sisa navelan'ilay loza niseho tany Banda Aceh, any Indonezia, sy nahita faminaniana momba ny ho avintsika i Ivan Sigal tamin'ny tsingerin-taonanan'ilay Tsunami tao amin'ny ranomasim-be Indiana tamin'ny 2004. Ny Creative Time Reports no namoaka voalohany ity tantara ity.
Tilikambonà Maoske iray nafindran'ilay tsunami tao amin'ny ranomasim-be Indiana tamin'ny 2004 ho any amin'ny 1,5 km mahery, araka ny sary aseho ao amin'ny tranom-bakoky ny Tsunami Aceh any Banda Aceh, Indonezia. Sary avy amin'i Ivan Sigal, 2012.
Nitsidika an'i Banda Aceh, renivohitry ny faritany any avaratra andrefan'ny tendron'i Sumatra, aho tamin'ny taon-dasa. Tanàna Indoneziana nisy ny foiben'ilay tsunami tao amin'ny ranomasim-be Indiana tamin'ny 26 Desambra 2004 izay nandrava ireo vondrom-piarahamonina hatrany Tailandy ka hatrany Somalia ary namono olona manodidina ny 230.000. Rehefa nisidina handeha hanampy tany Sri Lanka aho, avy hatrany taorian'ilay onjabe, dia nanaraka akaiky ny tantaran'ny fanarenana an'i Banda Aceh nandritra izay ny taona maro. Tiako ho hita maso mihitsy ny safidy ataon'ny vondrom-piarahamonina iray amin'ny fanarenana sy ny fahatsiarovana ireo fahavoazana tamin'ilay loza. Sady mahavaky fo no azo angalana lesona ny zavatra hitako, fahatsiarovana ny loza taloha sy filazana ny zavatra ho avy.
Saika efa voaarina tao anatin'ny dimy taona i Banda Aceh, na dia misy hita tavela eny antsisin-tanàna aza ny ratra navelan'ilay tsunami, maka endrika fefiloha sy ireo sisanà tetezana mamakivaky ny helo-drano, ary mitohy hatrany ny tetikasa fananganana trano eny an-tsisin'ny tanàna. Misy fivoarana ara-politika ny faritanin'i Aceh izay i Band Aceh no renivohiny ; nanao fifanarahana hisian'ny fandriam-pahalemana sy fizakantenam-paritra ireo mpikomy mitàm-piadiana ao anatin'i Aceh. Na dia efa maherin'ny 7 lavitrisa dolara aza ny vola nomen'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena ho fanampiana ny asa fanarenana, araka ny fijoroana vavolombelon'ireo olona sasany dia tsy mifanaraka amin'ny fandaniana ataon'ireo tanàna kely na ireo faritra lavitra ny fikorianan'ilay vola, toy izany ihany koa ireo nandresy tamin'ny tsy fifankahazoana ara-politika. Miaraka amin'ny fanarenana ny renivohitra sy ny faritra onenan'ireo mpanam-bola, manorina tsangambato sy fasam-bahiny ary tranombakoka koa ny tanàna. Mitahiry ny fahatsiarovana ireo olona 160.000 matin'ny tsunami tany Aceh io toerana io, ary mitàna anjara toerana hafa ihany koa noho izy sady mampianatra ny fahalalam-pomba sy fandraisana anjara amin'ny fampianarana fahaiza-miaina ary ny fizahantany naterak'ilay tsunami.
Sary hosodoko mampiseho ireo olona mandositra ny onja, tranombakoky ny Tsunami ao Aceh, Banda Aceh, Indonezia. Sary avy amin'i Ivan Sigal, 2012.
Sary hosodoko maneho ireo olona mihanika ny tafon-trano, tranom-bakoky ny Tsunami Aceh, Banda Aceh, Indonezia. Sary avy amin'i Ivan Sigal, 2012.
Mampivoitra kokoa io tanjon'ny fampianarana fahaiza-miaina io ny Tranombakoka Tsunami-n'i Aceh. Sarinà fahafatesana sy faharavana, nalaina taorian'ny tsunami, mihodina tsy misy fiafaràny ; mampiseho ireo sary tamin'ilay fotoana nampivarahontsana ny lahatsary, amin'izao fotoana izao dia efa namboarina sy natao lafika voahodidina balaonina manga mahafinaritra. Mampahatsiahy indray ireo horohoro sy fahafatesana ireo sary hosodoko : sary olona vita amin'ny tanimanga mihantona amin'ny sambo kely na mandositra ilay onja lehibe vita amin'ny fetan-taratasy manga. Sarin'ny tanàna nisy ny Grand Mosque Baiturrahman, iray amin'ireo fotodrafitrasa vitsy tsy ravan'ny onja, mijoro irery manoloana hosodokonà ranomasina misamboaravoara sy lanitra. Ireo moto harafesina sy sarinà horohorontany, ao anaty fitaratra, dia nanjary zavatra nisy vidiny sy hajaina. Misy sarintany maromaro mifandray mampiseho ny fiovan'ny tora-pasika vita lasitra natao tamin'ny ‘fibre de verre’ marokoroko mivolom-batolalaka. Trano maodely naorina eo ambony fitaovana iray fibatàna enta-mavesatra no manao sarintsarina fanozongozona ny tany. Ireo zavatra ireo dia hahafahantsika mijery avy hatrany ny loza sy izay mety hialantsika aminy amin'ny alàlan'ny fanakelezana ny maridrefy ampiasaina, asehon'ny tanimanga ary noraketina an-tsary sy nohidiana ao anaty fitaratra. Ataon-dry zareo aminò toerana tsara aro ny fanandramana no sady manome lanja ny asa famoronana sy ny fitehirizana ny filaharan-javatra – fanohanana ankolaka ny fanjakana taty aoran'ny fifandonana.
Trano vaovao naorin'ireo mponina, Banda Aceh, Indonezia, sary avy amin'i Ivan Sigal, 2012.
Ankoatra ireo tsangambato fahatsiarovana, dia tanàna vao naorina indray i Banda Aceh, ao anatin'izany ireo trano mifanolobodirindrina mitovy endrika naorina avy tamin'ny vola nomen'ireo vondrona mpanampy sy ny fanohanan'ny mpandraharaha iraisam-pirenena. Ny tompon'ny trano tsirairay no nanome endrika azy; ireo lokon'ny anoloana samy hafa, ireo varavarana, ny tokontany sy ireo zavatra hafa fanampiny dia manome izay mampisongadina manokana ny tsirairay. Voaaron'ny fefiloha sy ny honko ny manodidina amin'izao fotoana izao. Ity no tanàna niverina tamin'ny fiadanany taloha, ranomasina tony. Toy ny hoe efa rakitry ny ela ny tantaran'i Aceh, saingy hevi-diso ny fiheverana hoe azo faritana aminà fampisehoana mari-pahatsiarovana ao anaty tranombakoka ny loza izay nahazo azy : ireo sary olona tanimanga latsaka an-drano ao anatin'ilay rano natao tamin'ny “fetan-taratasy”, matahotra aho, dia taratry ny ho avintsika ihany.
Tamin'ny nandehanako voalohany hankany Sri Lanka, andro vitsy taorian'ilay tsunami, no nanova ny fiainako tamin'ny naha-vavolombelona nanatri-maso ny halehiben'ny faharavana sy ny fanandramana hanampy taorian'ny loza. Tonga tato anatiko ny fahatsapana ny vonjy taitra sy ny fahatakarana fa matetika ny fidadasiky ny loza dia vokatry ny tsy fahombiazan'ny olombelona fa tsy noho ny loza voajanahary loatra. Taorian'ny tsunami dia nisy ny rivodoza Katrina, ny horohorontany tany Kashmir, ny horohoron-tany Haiti, orambatravatra Sandy, ny rivodoza Haiyan ary ireo loza maro samy hafa. Tamin'ny tsirairay amin'ireny seho ireny dia mazava fa tena tsy ampy ny ezaka ataontsika hampihenana ny fahavoazana ateraky ny loza voajanahary. Ny faminavinana ny rivodoza mahery sy matetika vokatry ny ampahany amin'ny fiakaran'ny hafanan'ny ranomasina dia midika fa tsy maintsy miezaka mifehy ny loza mitatao toy ireny nandritra ny taona maro isika. Vao eo ampanombohana mahafantatra izay tsy maintsy atao isika, ary arakaraky ny hifampiandrasantska no mampahaosa antsika.
(Diorama) Sary namboarina maneho ilay mosquée lehibe Baiturrahman any Banda Aceh, tranombakoky ny Tsunami Aceh, Banda Aceh, Indonezia. Sary avy amin'i Ivan Sigal, 2012.
Sary namboarina maneho toby famokarana herinaratra amin'ny solika mitsingevana, Tranombakoky ny Tsunami Aceh, Banda Aceh, Indonezia. Sary avy amin'i Ivan Sigal, 2012.
Sary namboarina maneho ireo olona mandositra ny onja, tranombakoky ny Tsunami Aceh, Banda Aceh, Indonezia (amin'ny antsipirihany). Sary avy amin'i Ivan Sigal, 2012.
Sary lehibe iray maneho ireo niharan'ny Tsunami, aseho ao amin'ny tranombakoky ny Tsunami Aceh, Banda Aceh, Indonezia. Sary avy amin'i Ivan Sigal, 2012.
Fototra ho anà trano vaovao any Banda Aceh, Indonezia. Sary avy amin'i Ivan Sigal, 2012.
Ny fiantraikan'ny fikikisan'ny riaka ny moron-dranomasina nandritry ny fotoana ela, tao Banda Aceh, Indonezia. Sary avy amin'i Ivan Sigal, 2012
Ireo vehivavy mipetrapetraka eny amoron'ny fefiloha any Banda Aceh, Indonezia. Sary avy amin'i Ivan Sigal, 2012.
Ireo sisan'ny tetezana iray tany Banda Aceh, Indonezia. Sary avy amain'i Sigal, 2012.